Kedu ihe bụ ọnwa: njirimara, nhazi na oghere | Meteorology netwọkụ
Ụwa anyị nwere ihe dị na mbara igwe nke na -agba ya gburugburu a maara dị ka ọnwa. Agbanyeghị, a ka nwere ihe anyị na -ahụ n'abalị, ọtụtụ ndị amaghị kedu ihe bụ ọnwa. Anyị na -ekwu maka satịlaịtị anyị nke na -ebute ike ndọda nke na -ebute ebili mmiri na akụkụ ndị ọzọ n'ụwa. Satellite anyị nwere njirimara pụrụ iche na mmegharị dị iche iche na -atọ ụtọ ịmara.
Ya mere, anyị ga -arara akụkọ a ka ọ gwa gị ihe bụ ọnwa, ihe njiri mara ya, mmegharị isi ya na oghere ya.
1 Kedu ihe bụ ọnwa
2 Kedu mmegharị ọnwa na-enwe?
Ọnwa bụ satịlaịtị nkịtị nke ụwa na naanị satịlaịtị nke ụwa nwere. N'ezie, ọ bụ anụ ahụ dị na mbara igwe nke enweghị mgbaaka ma ọ bụ satellites. Enwere ọtụtụ echiche iji kọwaa nhazi ya, mana ihe kacha anabata bụ na mmalite ya mere ihe dị ka nde afọ 4,5 gara aga, mgbe ihe yiri Mars na ụwa dabara. Ọnwa sitere na mpekere ndị a wee, mgbe nde afọ 100 gachara, magma ahụ a wụrụ awụ kụrụ kristal wee mepụta eriri ọnwa.
Ọnwa dị ihe dị ka kilomita 384 site n'ụwa. Mgbe anyanwụ gachara, ọ bụ ihe ahụ na -enwu enwu n'eluigwe nke a na -ahụ n'elu ụwa, n'agbanyeghị na elu ya bụ ọchịchịrị n'ezie. Ọ na -agbagharị gburugburu ụwa n'ime ụbọchị 400 nke ụwa (ụbọchị 27 ma ọ bụ awa 27) wee na -agba n'otu ọsọ. N'ihi na ọ na -agbagharị na -ejikọ ụwa ọnụ, ọnwa nwere otu ihu ka ya. N'ihi teknụzụ dị ugbu a, amaara nke ọma na "ihu zoro ezo" nwere oghere, nkụda mmụọ akpọrọ thalassoids, na enweghị oke osimiri.
Ihe ndị a na -ahụ maka ọnwa na -eme agadi dịka mmadụ. Aha ya pụtara n'ọtụtụ obodo mepere emepe bụkwa akụkụ nke akụkọ ifo ha. Ọ nwere mmetụta dị mkpa na okirikiri nke ụwa: ọ na -ahazi mmegharị nke ụwa na axis ya, nke na -eme ka ihu igwe kwụ chịm. Kedu ihe ọzọ, Ọ bụ ya na -akpata ebili mmiri nke ụwa n'ihi na ọ na -emepụta ihe site na ndọda nke ike ndọda, nke na -amanye mmiri n'ike n'otu akụkụ wee dọpụta ya n'akụkụ nke ọzọ, na -ebute oke mmiri na ebili mmiri.
Kedu mmegharị ọnwa na-enwe?
N'ihi ịdị ike ndọda n'etiti ọnwa na ụwa, satịlaịtị a nwekwara mmegharị eke. Dị ka ụwa anyị, o nwere mmegharị abụọ pụrụ iche, nke a na -akpọ ntụgharị na ntụgharị gburugburu ụwa. Mmegharị ndị a bụ ihe e ji mara ọnwa ma nwee njikọ na ebili mmiri na oge ọnwa.
Ọ chọrọ oge ụfọdụ ka ọ nwee ike mechaa mmegharị ya. Dị ka ọmụmaatụ, okirikiri ntụgharị asụsụ zuru oke na -ewe nkezi ụbọchị 27,32. N'ụzọ na -akpali mmasị, nke a na -eme ka ọnwa na -egosi anyị otu ihu ahụ mgbe niile, ọ na -adịkwa ka edoziri kpamkpam. Nke a bụ n'ihi ọtụtụ ihe jiometrị na mmegharị ọzọ a na -akpọ ịma jijiji ọnwa.
Mgbe ụwa na -agba anyanwụ gburugburu, ọnwa na -agbagharịkwa, mana n'ụwa ọ na -anọ n'akụkụ ọwụwa anyanwụ. N'oge mmegharị ahụ niile, ịdị anya nke ọnwa na ụwa na -agbanwe nke ukwuu. Ogologo a dabere kpamkpam mgbe ị nọ na okirikiri ya. Ebe ọ bụ na orbit dị n'ọgba aghara na mgbe ụfọdụ ọ na -adị anya, anyanwụ na -enwe nnukwu mmetụta na ike ndọda ya.
Mmegharị nke satịlaịtị anyị na -atụgharị na -emekọrịta na ntụgharị asụsụ. Ọ na -ewe ụbọchị 27,32, yabụ anyị na -ahụ otu akụkụ nke ọnwa mgbe niile. A na -akpọ nke a akụkụ ọnwa. Mgbe ọ na -agbagharị, ọ na -etolite nhu ihu nke ogo 88,3 n'ihe gbasara ụgbọelu ellipse nke ntụgharị. Nke a bụ n'ihi ike ndọda nke na -eke n'etiti ọnwa na ụwa.
Ọnwa nwere elu okwute siri ike, ihe kacha pụta ìhè bụ ọnụnọ nke nnukwu oghere na efere. Maka ikuku ya adịghị ike nke ukwuu na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị, ọ nweghị ike iguzogide mmetụta nke asteroids, meteorites ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị na mbara igwe, na-enye ha ohere ka ha na ọnwa daa.
Mmetụta a rụpụtakwara iberibe irighiri ihe, nke nwere ike ịbụ nnukwu okwute, icheku ọkụ, ma ọ bụ ájá dị mma, nke a na -akpọ oyi akwa. Mpaghara gbara ọchịchịrị bụ efere nke lava kpuchiri ihe dị ka nde afọ 12-4,2 gara aga, na mpaghara na-egbuke egbuke mejupụtara ihe a na-akpọ ugwu. N'ozuzu, mgbe ọnwa juputara, ọ dị ka ọ na -etolite ọdịdị ihu mmadụ ma ọ bụ oke bekee dịka omenala ụfọdụ siri dị, ọ bụ ezie na n'ezie ebe ndị a na -anọchite anya ngwakọta na afọ dị iche iche nke okwute ahụ.
Ikuku ya, nke a na -akpọ exosphere, dị ezigbo mkpa, adịghị ike ma dịkwa gịrịgịrị. N'ihi nke a, meteorites, comets na asteroids collisions na elu na -adịkarị. Naanị ifufe nwere ike ibute oke ifufe ka edere.
Ndị ọkà mmụta sayensị anọwo na -amụ afọ ole okwute dị na mbara ụwa anyị na ọnwa. Nkume ndị a na -esi na mpaghara nwere akara nke nwere ike ikpebi mgbe olulu ahụ malitere. Site n'ịmụta mpaghara niile nke ọnwa dị ncha na akpọrọ plateaus, ndị sayensị achọpụtala ozi gbasara nhazi ọnwa. E hiwere ya ihe dị ka nde afọ 460 ruo 380 gara aga, na okwute ndị ọzọ dara n'elu ọnwa kọrọ na ọ kpụrụ ngwa ngwa. Mmiri ịsa ahụ kwụsịrị wee nwee oghere ole na ole kemgbe ahụ.
A na -akpọ ụfọdụ nlele okwute ndị e wepụtara na ndagwurugwu a afọ ya dị ihe dị ka nde afọ 3.800 ruo 3.100. Enwekwara ihe atụ nke nnukwu ihe asteroid dị ka kụrụ ọnwa mgbe oke okwute kwụsịrị.
N'oge na -adịghị anya ihe omume ndị a mechara, nnukwu lava jupụtara efere niile wee mepụta oke osimiri gbara ọchịchịrị. Nke a na -akọwa ihe kpatara na ọ dị obere oghere n'oké osimiri, mana enwere ọtụtụ oghere na ala dị larịị. Ọ bụ kpọmkwem n'ihi na mbara ala ndị a juputara n'elu ọnwa n'oge e guzobere usoro mbara igwe, enweghị ọtụtụ mmiri na -asọ na mbara ala nke mere ka oghere mbụ ahụ pụọ.
Akụkụ kachasị anya nke ọnwa nwere naanị "oke osimiri" ya mere ndị sayensị kwenyere na mpaghara a na -anọchite anya mmegharị nke ọnwa ijeri afọ anọ gara aga.
Iji mụọ oghere dị na ọnwa, anyị ga -aghọta ọdịdị ala nke ọnwa. Na ọtụtụ ọzara ndị dị larịị ma ọ bụ ndị bụbu akụkụ nke oke osimiri. Ọ bụghị ihe ijuanya, enwerekwa oke osimiri na ọnwa nke ọnwa. Nke kacha n'ime ha bụ Mare Imbrium, nke a na -akpọ Mar de Lluvia n'asụsụ Spanish, nwere dayameta nke ihe dị ka kilomita 1120.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ihe ọnwa bụ na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedu ihe bụ ọnwa